ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်
ရောဂါပိုးတွေ ရန်ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ? ဒီမေးခွန်းကို လူတိုင်း ဖြေတတ်မှာပဲပေါ့။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းအောင် နေပါလို့လေ။ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ ရော သေချာသိကြပြီးပြီလား။
ဒါမှမဟုတ် လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ အထက်ပါအတိုင်း ပွတ်သပ်သန့်စင်ပါ။
အသား၊ ငါး၊ ပဲ၊ ဥ၊ အစေ့အဆန် တွေ ပါဝင်ရမယ်။ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အဆီလျှော့ နွားနို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း တွေ ပါသင့်တယ်။
ပြည့်ဝဆီ၊ အသွင်ပြောင်းဆီနဲ့ နဲ့ ကိုလက်စထရောတက်စေမယ့် အရာတွေ ရှောင်ရမယ်။
Accessed Apr-3, 2020.
ကိုယ်တွေနဲ့အတူ ဖေဖေမေမေတို့လည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဖေဖေမေမေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ